Awu ukwahlulela eduze kwezithungo abangane ngiye ucambalele phezu ezingeni 29 umaka Ngizofika ukwenza ikholi ukwahlulela bese usho omunye walo olukhohlisayo. Nge umgomo we evulekile 99% amabhlogo futhi abahola 16 000 amaphuzu Nginezinye engqondweni futhi sikhumbula ukuthi kungani lokhu kuye kwaba stop emgodini ezinye obuphelele kwabaningi kangaka.
Its hhayi kanzima, frustratingly yayo kanzima!
Kodwa Uma angikwazi ukukwenza ngakho ungakwazi, nje yayo kuyindaba yokukhathalelwa ukucabanga phambili futhi wokuqonda ngemiphumela yezenzo zethu (wow mina izwakala uthisha wami 10th grade!)
Ukuthola ibhomu phezu phansi kwesokunxele kuya amabhlogo kuza kuqala ekuphileni kwakho kokuqala.
Okokuqala Burst zonke Balloons phezu kakhulu kwesokunxele kuze ibhomu lishaya wire ezinkanjini, ke nishaye it up! lokhu uzokunika intuthuko. Sebenza indlela yakho kanye uze wehlise isihluthulelo avala rocks, nokukhululwa kwabo kanye ukhiye imahhala. Zama bese ugcine Balloons yakho esele, Bazongena beze ngokushesha Ukugunda. Uma usuvule irowu amatshe nomoya waya ether ungase uqale kokuphuma Balloons. Uzophawula ukuthi okuncane ibhaluni ingavula a ezinkanjini ezimbalwa ngesikhathi, kodwa kuphela uqhumise amabhlogo eduze, ungenaso okuncane emabhuloki ngaphakathi ezinkanjini kodwa abanendlela eduze kwayo! Ungahambi kakhulu silly uma ziyethile kwesikrini isiqalo ngokwanele ukuba aphule evulekile amakheji kusukela ngezansi, ukulondoloza njengoba Balloons eziningi ngangokunokwenzeka…babehlale babonakala singaba usizo kabi, kodwa gcina ukuthi isikrini ezihambayo phansi.
Keys ukuvula izitini
Leli akulona ezingeni lapho ukunyakaza kwakho anqunyelwe ngakho siyishaye, kodwa dont bayakhohlwa okhilikhethi yakho, ukuzisebenzisa ngokuhlakanipha futhi khumbula ukuthi ngeke ukwazi uqale ukuthola enye kuze kube yilapho owokuqala kwase kumiswe off. Uma une eyodwa ebhodini futhi lonke iqoqo up inhlanganisela enkulu phambili mhlawumbe nje bawubeka off futhi ahlanze kancane ngaphezulu. Khumbula esibukweni yamabhuku ziyethe uma kukhona uhamba kanye amabhlogo noma Balloons ubambe it up.
Ukuba ibhomu phansi kungaba Ukugunda kakhulu!
Kukhona okhiye ngaphezulu ngezansi bese okhilikhethi zimi kahle zilungele ewakhulula. Gcina inhloso yakho njengoba uya, dont uzithola phezu ngezansi kwesikrini nge licorice zonke isikhwama izinhlobo amabhlogo ezinemibala esalayo futhi ukucabanga 'baphi ezifuywayo?’ umgomo wakho kumane ukusula 99% amabhlogo ….Doh! Lokhu kusho ukuthi ungakwazi kuphela 1 kwesokunxele! Lwela ukugcina imibala ndawonye uma ungagcina ibhomu ngoba phansi Ngiqinisile ngithi kini lesi singaba usizo kabi, nakanjani uzogcina nge amabhlogo amabili…yeah, akazange ngikhuluma kukhungathekise?